Chicken Anụmanụ | Di na Nwunye Maka Uzo
Oge nri55 mins
N'ezie: Ntinye, Isi nkuzi
3 iko ihendori bekee kpuchie
1 / 2 Iko molasses
1 / 2 Iko tomato kechoopu
1 / 4 Iko cider mmanya
3 tablespoons aja aja aja aja
2 teaspoons yabasị ntụ ntụ
1 teaspoon garlic ntụ ntụ
1 teaspoon nnu
1 / 4 teaspoon ose talugwu
3 pound ọkpụkpụ-na iberibe anụ ọkụkọ (ara, ụkwụ ya dum, apata ụkwụ gị, na / ma ọ bụ drumsticks), agbachasị agbacha agbago.
N'ihi ihendori: Whisk ihe nile eji amu amu n’eji esi esi.
Belata ọkụ na ọkara ma sie nri ruo mgbe ihendori siri ike ma belata ya na iko 3, ihe dị ka nkeji 20. (Enwere ike itinye friza n'ime akpa ikuku ruo izu 1.)
Maka anụ ọkụkọ: gwakọta nnu, ose, na cayenne na nnukwu efere. Kpoo ọkụkọ kpọrọ nkụ na akwa nhicha ma jiri mmanụ na-ete ihe na-acha uhie uhie.
Mepee oghere mgbapụta na imi ihe. Ìhè nnukwu igwe eji anwụrụ ọkụ jupụtara na unyi na-ere unyi (ihe dị ka 100 coaland burn) ruo mgbe ejiri ezigbo ntụ isi kpuchie unyi.
Debe 13 site na 9-inch nwere ike gbanyụọ mkpanaka amịkpọ pan n'otu akụkụ nke gill ma wụsa icheku na oyi akwa n'ofe ozo nke gill.
Debe ebe a na-esi esi nri, ebe mkpuchi, na-emeghe oghere mkpuchi kpamkpam, ma hapụ ka ọkụ ghee ọkụ maka minit 5. Bechapu esi nri na grate dị ọcha.
Mmanụ na mmanụ ma gbanye ọkụkọ anụ n'akụkụ akụkụ nju oyi.
Kpuchie ya ekpuchi, ya na mkpuchi mkpuchi mepere ọkara na-efesa ọkụkọ, wee sie nri ruo mgbe ọkụkọ malitere agba aja aja, oge 30 ruo 35. Megharia ọkụkọ n'ime eriri oku dị nso na icheku ọkụ.
Bido ịkpụgharị ọkụkọ na iberibe ya na iko 2 ihendori 5 nkeji ruo mgbe nnyapade, ihe dị ka nkeji 20.
Iberibe iberibe ọkụkọ n’elu icheku ọkụ ma gaa n’ihu n’isi anụ ọkụkọ ruo mgbe ihendori n’elu ọkụkọ wee bụrụ ihe a gbanyere mkpọrọgwụ na okpomoku n’ime anụ ahụ na-ede ogo 165 na ukwu ya, apata ụkwụ ya, na udu mmiri na-ede ogo 175, ihe dị ka nkeji 5.
Nyefee ọkụkọ na platter, nwee ụlọikwuu na foil, ma hapụ nkeji 10.
Wepu foil ma jee ozi, na-agafe ihendori fọdụrụ na tebụl.
Category: American, Nri na ihe ọṅụṅụ, North America, Ezi ntụziaka Tags: american, ọkụkọ anụ, nri, uzommeputa
← Etu esi etinye ụbọchị 5 na Sidney
Nyocha Review Planner App Review Sygic →